यी हुन विश्वकै का मु क महिला राजनितिज्ञ, जसको बारेमा थाहापाउनुभयो भने उड्नेछ तपाईको होस् ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी हुन विश्वकै का मु क महिला राजनितिज्ञ, जसको बारेमा थाहापाउनुभयो भने उड्नेछ तपाईको होस् !
३.मिकेला विटोरिया बरमबिल्ला ः उनी इटालीको राजनितिमा एक चर्चित हुनु ।बाल्यकालदेखि नै राजनितिमा रुचि राख्ने चाहना नै राजनितिज्ञ बन्ने थियो । सन् २००८ मा मिकेला इटालियन क्याबिनेटमा सहभागी भइन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री बनिन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
९.एलिना कबाइवा : उनी रुसकी महिला राजनितिज्ञ हुन् । सन् २००७ मा एलिना प्रो क्रेमलिन युनाइटेड रसियनको सदस्य स भइन् । सुन्दर नेत्रीको एक सफल जिम्न्यास्ट पनि बनिन् । ओलम्पिकमा २ मेडल, वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा १४ मेडल र युरोपियन च्याम्पियनसिपमा २५ मेडल जितेकी छन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **